Tapakila fiaran-dalamby OBB mora ary vidiny fitsangatsanganana | Save A Train
Tapakila fiaran-dalamby OBB mora ary vidiny fitsangatsanganana
Home > Tapakila fiaran-dalamby OBB mora ary vidiny fitsangatsanganana
Eto ianao no afaka mahita ny fampahalalana rehetra momba Tapakila fiaran-dalamby OBB ary Vidin'ny fitsangatsanganana OBB ary tombony.
Lohahevitra: 1. OBB amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
2. Momba ny OBB 3. Fiatrehana ambony hividy tapakila fiaran-dalamby OBB
4. Ohatrinona ny vidin'ny tapakila OBB 5. Lalana fitsangatsanganana: Fa maninona no tsara kokoa ny mitondra ny lamasinina OBB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
6. Inona no tsy mampitovy ny faneva, fampiononana, ary Sparschiene ao amin'ny OBB 7. Misy famandrihana OBB ve
8. Hafiriana alohan'ny hivoahan'ny OBB 9. Inona no fandaharam-potoanan'ny lamasinina OBB
10. Ireo toeram-piantsonana ireo no atolotry ny OBB 11. FAQ FAB
OBB amin'ny alàlan'ny Hevitra Misongadina
Miaraka amin'ny tahan'ny mari-pahaizana ambony amin'ny 96%, OBB (indraindray antsoina hoe OEBB) dia iray amin'ireo mpandraharaha azo antoka indrindra any Eropa.
Isan-taona, Mandray ny OBB 447 tapitrisa tapitrisa sy 105 entana an-tapitrisany taonina manerana ny taniny ao Aotrisy sy manerana an'i Eoropa.
Ny OBB dia sariaka be amin'ny tontolo iainana, ary 100% ny herin'izy rehetra dia avy amin'ny angovo azo havaozina.
OBB no mpanome serivisy fanatanjahantena lehibe indrindra any Aotrisy.
Momba ny OBB
OBB, Railway Federal Australiana, dia anarana iray hafa ho an'ny Railway Federal Austrian. Hatramin'ny niorenany tao 1923, OBB dia nanolotra serivisy fanentanana ho an'ny olom-pirenena Aostraliana nandritra ny taona maro izao. Ny fanadihadiana vao haingana dia nanaporofo fa tany Eropa, Ny OBB no tsara indrindra amin'ny fahantrana, azo itokisana, ary matetika.
Manolotra ny OBB serivisy lalamby ao Aotrisy ary manerana an'i Eoropa. Miaraka amin'ny tapakila mety, azonao atao ny mitsidika ny tsara indrindra toerana fialan-tsasatra any Eropa. Miaraka amin'ny sokajin'ny sokajy sy ny famandrihana karatra, OBB mifantoka amin'ny filan'ny tsirairay.
Ny fiaran-dalamby OBB matetika no tao Vienne – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – St. Polten, Graz - Salzburg. Azonao atao ihany koa ny mankany amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina ao Eoropa mampiasa fiaran-dalamby OBB.
Manerana ny orinasa, 41,904 mpiasa miasa amin'ny tamba-jotra sy fiara fitateram-bahoaka (miampy eo amboniny 2,000 apprentices) antoka fa misy ny sasany 1.3 mpandeha an-tapitrisany maro no tonga soa aman-tsara isan'andro.
Mandeha Tehirizo ny tranokala fiaran-dalamby na ampiasao ity widget ity hikarohana azy tapakila ho an'ny OBB
Fiatrehana ambony hividy tapakila fiaran-dalamby OBB
Number 1: Soraty mialoha araka izay tratranao ny tapakila OBB anao
Ny vidin'ny Tapakila fiaran-dalamban'ny OBB dia miakatra rehefa manakaiky ny andro fitsangatsanganana. Azonao atao ny mamonjy vola amin'ny alàlan'ny famandrihana ny tapakilan'ny fiaran-dalamby misy anao OBB manomboka amin'ny andro hialana amin'ny andro fialana. Ny tapakila fiaran-dalamban'ny OBB dia azo alaina aloha kely 3 ny 6 volana mialoha ny fialan'ny lamasinina. Ny famandrihana voalohany dia ahafahanao mahazo ny tapakilan'ny lamasinina OBB mora indrindra. Voafetra ihany koa ny isa, noho izany dia vetivety ny boky ianao, ny mora kokoa ho anao. Mba hitehirizana vola amin'ny tapakilan'ny lamasinina OBB, amidy vao tapakilao.
Number 2: Fitsangatsanganana amin'ny OBB mandritra ny fotoana an-tampony
Tapakila fiaran-dalamby OBB mora kokoa mandritra ny fotoana tsy misy farany, amin'ny fiandohan'ny herinandro, ary mandritra ny andro. Afaka mahazo antoka ianao fa mahazo fiaran-dalamby mora kokoa tapakila ao anatin'ny herinandro. Amin'ny talata, Alarobia, sy Alakamisy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby OBB no ekonomika indrindra. Noho ny habetsahan'ny mpandraharaha mandehandeha manao asa maraina sy hariva, Ny tapakilan'ny lamasinina dia mety ho lafo be. Izy io dia mora kokoa ny mandehandeha amin'ny fotoana anelanelan'ny maraina sy ny hariva. Ny faran'ny herinandro dia fotoam-pitsarana hafa ho an'ny fiaran-dalamby, indrindra ny zoma sy ny asabotsy. Mitombo ihany koa ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby ny fialantsasatra ary fetin'ny sekoly.
Number 3: Alefaso ny tapakilan'ny OBB rehefa azonao antoka fa ny fandaharam-pizahan-tany
Fiaran-dalamby tena mitaky mafy, ary miaraka amin'ny fifaninanana kely, Izy ireo izao no mijanona ho safidy ambony indrindra ho an'ireo lamasinina any Aotrisy. Azon'izy ireo atao ny mametraka ny fetra fidina amin'ny fiaran-dalamby toy ny ananan'izy ireo izay mandrara ny fifanakalozana tapakila na famerenam-bola raha tsy izany no karazan'orinasa mpandraharaha. Na dia mbola misy tranokala ahafahanao mivarotra ny tapakila faharoa amin'ny olona, OBB dia tsy mamela ny fivarotana tapakila tanana faharoa. Ahoana no fomba hanampianao vola hitehirizana vola? Alao fotsiny ny tapakilan'ny tapakila raha azonao antoka fa hamonjy anao amin'ny famandrihana tapakila iray indroa ny tapakilanonao satria misy zavatra tonga ary tsy afaka mampiasa tapakila tany am-boalohany ianao.
Number 4: Vidio ny tapakilan'ny OBB anao amin'ny Save A Train
Save a Train dia manana ny lehibe indrindra, ny tsara indrindra, sy ny tapakila mora indrindra ho an'ny tapakilan'ny lamasinina any Eropa. Ny fifandraisantsika amin'ireo mpandraharaha gara maro, loharanom-baovao momba ny tapakilan'ny lamasinina, ary ny fahalalantsika ny algorithm teknolojia dia manome anay miditra amin'ny fifanarahana tapakila tapakila mora indrindra. Izahay tsy manolotra tolotra tapakila mora ho an'ny OBB irery ihany; manolotra mitovy mitovy amin'ny an'ny safidy hafa amin'ny OBB izahay.
Ohatrinona ny vidin'ny tapakila OBB?
Ny tapakila OBB dia manomboka amin'ny € 1,5 ka hatramin'ny avo 49 € mandritra ny dia fiaran-dalamby. The vidin'ny tapakilan'ny lamasinina OBB Miankina amin'ny karazana tapakila fidianao ary rehefa misafidy ny handeha ianao:
Standard 1,50 € – € 51 2,40 € – € 100
Kilasy voalohany 1,50 € – € 51 2,40 € – € 100
Lalana fitsangatsanganana: Nahoana no tsara kokoa ny mitondra fiaran-dalamby OBB, ary tsy mandeha amin'ny fiaramanidina
1) Tonga any amin'ny ivon'ny tanàna ianao. Ity no tombony amin'ny fijanonan'ny fiofanana OBB raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina. Ny fiaran-dalamby OBB sy ny fiaran-dalamby rehetra dia mandeha amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna ka hatrany afovoan-tanàna manaraka. Izy io dia mamonjy fotoana sy ny vidin'ny taksiam-piaramanidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna. Mijanona ny fiaran-dalamby, moramora kokoa ny mankany amin'ny toerana mankamin'ny tanàna alehanao. Tsy maninona na aiza na aiza ianao, Munich, Salzburg, Linz, na Cologne, Ny fijanonana afovoan-tanàna dia tombony lehibe amin'ny lamasin'ny OBB!
2) Ny fitsangatsanganana fiaramanidina dia mitaky anao tokony ho eny amin'ny seranam-piaramanidina farafahakeliny ora maromaro alohan'ny fotoana amin'ny sidinao. Tsy maintsy mandinika fisavana ianao alohan'ny hamela anao hiditra ao amin'ilay fiaramanidina. Miaraka amin'ny fiaran-dalamby OBB, dia tokony ho eo amin'ny toby fiasana latsaky ny ora iray mialoha ianao. Rehefa dinihinao koa ny fotoana ilana anao hidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina mankany afovoan-tanàna, ho tsapanao fa ny fiaran-dalamby OBB dia tsara kokoa raha ny ora fandehan'ny dia.
3) Eo amin'ny lafiny rehetra, ny vidin'ny tapakilan'ny lamasinin'ny OBB dia toa lafo kokoa noho ny tapakila fiaramanidina mitentina. Na izany aza, rehefa mampitaha ny fiampangana rehetra voarohirohy, Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby OBB dia manana vidiny mora kokoa. Miaraka amin'ny vidin-javatra hafa toy ny saram-bidy izay tsy andoavanao vola amin'ny lamasinina, nandehanan'ny OBB no tsara indrindra.
4) Ny lamasinina dia mety amin'ny tontolo iainana. Raha oharina amin'ny fiaran-dalamby sy fiaramanidina, ireo lamasinina dia hivoaka eny ambony. Mandoto ny rivotra ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny karbonina avo lenta. Ny fiaran-dalamby dia mampitaha Karbona 20X ambany kokoa fa ny fiaramanidina.
Inona no tsy mampitovy ny faneva, fampiononana, ary Sparschiene ao amin'ny OBB?
Ny OBB dia manana kilasim-pivarotana isan-karazany ho an'ny teti-bola samihafa sy karazan'olona mpandeha: na fandraharahana na fialam-boly. Azonao atao antoka fa mifanaraka amin'ny iray amin'ireo tapakila ireo izany.
Tapakila standard OBB:
Ny tapakila fenitra dia ny tapakilan'ny fiarandalamby mora indrindra izay atolotry ny OBB. Raha toa ka tsy maintsy mandeha mizaha fiantsoana fohy, tokony hahazo io tapakila io ianao. Tsy voafetra amin'ny lamasinina manokana ianao, ary navela hisafidy ny fifandraisanao ianao. Ny tapakila fenon'ny OBB dia manan-kery 2 andro tsy an-kanavaka amin'ny lalana sy fantsona fividianana. Ny tapakila fenitra dia azo averina aloa andoavana iray andro alohan'ny andro voalohany hanamarinana. Rehefa mividy ity tapakila an-tserasera ity, misy torolàlana manokana amin'ny famerenana sy fanamarinana.
OBB Tapakila fampiononana:
Tapakila OBB Komfort tapakila tsy tapaka, ary atolotra ho azy ireo fifandraisana amin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby. Ny tapakila OBB Komfort dia mandrakotra ny vidin'ny dia, famandrihana amin'ny sokajy fitsangatsanganana voafantina, sy sakafo maraina ao amin'ny trano fatoriana natory.
Tsy toy ny tapakila mahazatra, ny tapakila Komfort dia tsy azo atao mihitsy. Natao ho an'ny lalana iray sy fiaran-dalamby manokana izany. Mila mila tapakila vaovao ianao raha mila fifandraisana eo alohan'ny sy aorian'ny làlan-dalan'ny tapakilan'ny tapakila ity.
Ho an'ny tamberim-bola, Ny tapakila Komfort an'ny OBB dia averina amidy maimaim-poana raha tsy 15 andro andro voalohany amin'ny fahamarinana. Aorian'ny 15 andro marika, Novidina ny tapakila Komfort 50% amin'ny vidiny tany am-boalohany.
Tapakila OBB Sparschiene:
Asides avy amin'ny tapakila mahazatra sy ny tapakila Komfort, OBB dia manolotra tapakila maro hafa fantatra amin'ny tapakila Sparschiene. Mividy ity laharan-jotra ity ary ho an'ireo mpandeha amin'ny tetibola ambany. Misy karazany roa ny tapakila Sparschiene.
Misy famandrihana OBB ve?
Ho an'ny olom-pirenena eto an-toerana, misy karazany roa ny famandrihana, ny Vorteilscard sy ny Osterreichcard. Ho an'ny Iraisam-pirenena dia manolo-kevitra ny hividy ela be mialoha izahay ary avy eo hatolotra anao ny safidy mora indrindra.
Azo vidiana ao amin'ny Vorteilscard Classic: (Nahazo a 45% fihenam-bidy amin'ny tapakila tokana ho an'ny mpandeha izay mividy ny tapakilan'izy ireo)
– Mpanisa tapakila tapakila OBB.
– Amin'ny serivisy mpanjifa OBB 05-1717
– Avy amin'ny mpiasa amin'ny fiaran-dalamby sy bus bus OBB.
Miaraka amin'ny Osterreichcard Classic, hahazo fihenam-bidy fanampiny famandrihana ho an'ny 5% amin'ny tapakila tokana ho an'ny mpandeha rehefa mividy tapakila avy:
– Masinina mpivarotra tapakila OBB any amin'ny gara.
Mpandeha efa lehibe 15 ary mihoatra ny afaka mividy ny Vorteilscard Family. Marina ity karatra ity miaraka amina karatra famantarana sary, izay tokony hahitana ny taonan'ny tompon'ny taona. Miaraka amin'ny tapakila ity, afaka mandeha amin'ny lamasin'ny OBB rehetra ianao.
Ireo rehetra tompon'ny fianakaviana Vorteilscard dia mankafy ny fantson'ny Vorteilscard mahazatra. Ho fanampin'ireo perks mahazatra, roa mpihazona karatra Vorteilscard Family dia mahazo ny fihenam-bidy koa raha miara-mandeha amin'ny zaza na zaza. 4 Hahazo fihenam-bidy ny zaza isaky ny tompon-tokantrano Vorteilscard 100% amin'ny tapakila tokana mahazatra.
Karatra Tanora ao Aotrisy
Miakatra mandra-pahatongan'ny andro talohan'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo, Ny mpandeha dia afaka mividy Jugend Osterreichcard. Azonao atao ny manaporofo ny taonanao amin'ny alàlan'ny ID sary misy porofon'ny taona.
Ireo ray aman-dreny rehetra ny zazakely sy zaza izay mahazo alalana fianakaviana any Aotrisy na any an-toeran-kafa dia afaka mividy Osterreichcard Familie. Ny tombony dia mitovy amin'ny an'ny Osterreichcard mahazatra.
Ny mpandeha dia afaka mividy Osterreichcard Classic. Miaraka amin'ny Osterreichcard Classic, dia hahazo fihenam-bidy 100% momba ny vidin'ny famandrihana seza ho an'ny kilasy 1 sy 2. Miaraka amin'ny kilasy faha-2 Osterreichcard Classic, mandray ianao a 50% fihenam-bidy amin'ny fiovan'ny kilasy faha-2 ka hatramin'ny faha-1 miaraka amin'ny tapakila tokana.
Mpandeha zokiolona Australiana efa zokinjokiny 63 ary mihoatra ny afaka mividy Osterreichcard Senior. Ny tombony dia mitovy amin'ny an'ny Osterreichcard mahazatra.
Ireo olona manan-kilema manana fika manaraka ireto ao amin'ny taratasy fanamarihan'izy ireo any Australiana na manana fahasembanana mahery vaika amin'ny ady dia afaka mividy Osterreichcard Spezial. Ny tombony dia mitovy amin'ny an'ny Osterreichcard mahazatra.
Linz to Saint Polten tapakila
Tapakila Vienna mankany Salzburg
Tapakila Saint Polten mankany Wiener Neustadt
Tapakila Salzburg mankany Graz
Hafiriana alohan'ny hivoahan'ny OBB?
Sarotra ny milaza marina amin'ny faharoa, fa Save Save Train dia manoroana fa tokony ho adiny iray alohan'ny fotoana hialanao. Raha mifarana amin'ny fifehezana pasipaoro aloha ianao, afaka miantsoroka ny zavatra ilainao mba hahafahanao mampandeha tsara ny dia amin'ny lamasininao.
Inona no fandaharam-potoanan'ny lamasinina OBB?
Azonao fantarina ao amin'ny tranokalanay ao amin'ny tranokalanay Save a Train. Ampidiro fotsiny amin'ny toerana misy anao sy ny toerana tianao haleha, dia hasehonay aminao ny fampahalalana.
Ireo toeram-piantsonana ireo no atolotry ny OBB?
Ny tobin'i Vienna of OBB dia Vienna Hauptbahnhof (Tobin'ny foibe any Vienna), izay eo akaikin'i Sudtiroler Platz eo afovoan'i Viena.
Ao amin'ny Linz, Androany fiaran-dalamby mandao ary tonga any amin'ny Station Central Linz (Ny toby afovoany any german dia mitovy amin'i Hauptbahnhof), tsy lavitra ny renirano Danube.
Fiantsonan'ny fiaran-dalamby ao Salzburg (Ivontoerana afovoany Salzburg) dia eo afovoan'ny tanàna faha-2 lehibe indrindra any Aotrisy – Salzburg.
Afa-kevitry ny basikety ve ny bisikileta? Lamasinina OBB?
Ny bisikileta dia navela amin'ny lamasin-dàlana OBB raha mbola mividy tapakila ho azy ireo eo amin'ny gara. Mitentina 2 dolara isaky ny bisikileta ireo.
Mandeha lavitra amin'ny fiaran-dalamby ao amin'ny OBB ve ny ankizy?
Eny, fa hatramin'ny taona iray ihany. Ankizy tanora kokoa noho ny enin-taona dia mandehandeha malalaka.
Omena lalana amin'ny fiaran-dalamby ireo biby fiompy?
Eny, raha mbola manaraka ny toro-marika ho an'ny biby fiompy izy ireo. Ny biby kely dia tsy maintsy entina ao anaty crate na tranga mitovitovy.
Inona avy ireo fomba fiasa ao amin'ny biraom-pifandraisana?
Ny toeram-piantsenana sasany dia manana fampisehoana elektronika izay manambara ny fananganana ireo lamasinina. koa, Ampiasao ireto mba hizaha ireo zina misy ny isan'ny mpanazatra ny lamasinina rehefa tonga ny lamasinina.
FAQ FAQ takiana indrindra – Mila mandefa seza mialoha alohan'ny OBB ve aho??
ianao afaka Book ny fantatroamin'ny mialoha an-trano OBB fiaran-dalamby 3 euro. ianao dia manovoza seza aorian'ny famandrihana.
Misy Internet WiFi ve ao anaty OBB?
Eny. Azonao atao ny mifaly Internet maimaim-poana amin'ny Internet amin'ny fiaran-dalamby rehetra ary kilasy fitsangatsanganana rehetra rehefa mividy tapakila OBB ianao (Ny tsara indrindra amin'ny SaveATrain.com).
Raha efa namaky hatreto ianao, fantatrao izay rehetra ilainao momba ny fiaran-dalanao OBB ary vonona hividy ny tapakilan'ny fiaran-dalambao OBB ianao Save A Train
Te hampidirina amn'ny tranokalanao ity pejy ity? kitiho eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code), Na azonao atao rohy mivantana ao amin'ity pejy ity.